Nyowani Midhiya Vanopa mazano - Kutsvaga, Zvemagariro, Vhidhiyo uye Nhare
Makondakita maKondakita… kukanganisa .. Vanopa mazano
Mugovera, July 3, 2010 China, Gumiguru 29, 2020 Douglas Karr
Pandakatanga DK New Media, Imwe yesarudzo dzekuita yaive yekumaka kambani. Sezvo ini ndichifunga nezve kushambadza uye nekushanduka kwayo, ini ndinowanzozvifananidza nekondakita uye nhetembo. Semubatsiri, ini ndinofanirwa kunge ndichiita kunge conductor, ndichibatsira kusanganisa masvikiro akasiyana uye nekuvashandisa kuti varove manotsi panguva dzakakodzera, kuitira kuti zano rinyatso zadziswa.
Ndakanga ndisingadi zera ini nekuzvitumidza zita rekuti mutengesi wekutengesa. Ini ndanga ndisingade kuzvidzora nekuzvidaidza kuti a search consultant or wezvemagariro media consultant. Zvakafanana nekutaura kuti iwe uri violinist, flautist, kana anoridza mhosho. Asi, ini ndaida kuzvimaka pachena.
Midhiya nyowani hazvireve kuti ndinofuratira midhiya yekare, uye hainditadzise mune ramangwana. Pachagara paine chinhu nyowani. Nyowani midhiya kubvunza kunogona kusanganisira kutsvaga, zvemagariro, vhidhiyo, nhare… kana chero chinhu chinouya pasi pombi. Izvi hazvireve kuti ini ndiri kuzozvisimudzira sehunyanzvi mune ese emarenas. Ini ndatova kushanda pamwe nemafemu emubatanidzwa uye vamiririri vane hunyanzvi mune izvo misoro.
Semubatsiri mutsva wenhau, inoisa tarisiro yandinogona kubatsira nayo ani midhiya… uye kudzidzisa vatengi vangu pane zvazvino kuitika mukutaurirana masvikiro. Uye ini ndinoedza kudzidza nezve uye kuvaka hunyanzvi mune ese matsva maitiro. Nguva nenguva, ndinotaura kuti ini do zvemagariro vezvenhau kubvunza kana kutsvaga kwekubvunza… asi ini handizvimake ndega munzvimbo idzodzo.
Ma conductor havafanirwe kuve vaimbi vanechiridzwa chero nechiridzwa chimwe chete; zvisinei, ivo vanonyatsonzwisisa mashandisiro echiridzwa chega chega, kuita kuti vese vashande pamwe, uye nekuita imwe mimhanzi yakanaka. Ichi chi kushambadzira orchestration.
Zvakaipa isu hatina kuzvidaidza isu vevatengesi!
Hezvino zvekugadzira imwe yakanaka mimhanzi yekushambadzira!
Tags: musaridzwamutyairimutengesi wekutengesakushambadzira kubvunzakushambadzira orchestrationmumhanzizvimhanzi
Sei uye Sei Kunyora Bhuku